कमिसन नपाउँदा बुढीगण्डकीको लाइसेन्स खारेजीमा... :: सुजिता कार्की :: Setopati
कमिसन नपाउँदा बुढीगण्डकीको लाइसेन्स खारेजीमा परेको ओलीको टिप्पणी
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं कात्तिक २८
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइएको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा प्रश्न गरेका छन्।
राजधानीमा वाम गठबन्धन उम्मेद्वारका परिचयात्मक कार्यक्रममा ओलीले के कारणले गेजुवालाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो? भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। 'गैर जिम्मेवार ढंगले कमिसन पाइएन भनेर अथवा भनेको राशी सहयोग पाइन? भनेर भैसकेको सम्झौता के कारणले भंग गर्यो?, हामीलाइ त थाहा छैन', ओलीले भने, 'के कारणले दिएको हिजो यहि सरकारले?, के कारणले खोसेको?'
उनले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह र सरकारमा के फरक छ? भन्दै प्रश्न गरे। 'कोही कब्जा गर्न जान्छ, कोही खोस्न जान्छ। यो सरकार लाइसेन्स खोस्न जान्छ', ओलीको भनाई थियो।
उनले अहिलेको सरकारले गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय उल्टाउने चेतावनी समेत दिए। 'निर्वाचनसँग सम्बन्धित बाहेक यतिबेला गरेका काम, आर्थिक गतिविधि, सम्झौता गर्ने वा उल्टाउने गतिविधि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले उल्टाउन सक्छ पुनर्विचार गर्न सक्छ', ओलीको भनाई थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गेजुवालाई दिइएको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशनमा लाइसेन्स खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै विषय नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
अध्यक्ष ओलीले एउटा समूह बम प्रहार गर्ने र सरकार त्यहि समूहलाई छुटाउन लागी परेको समेत बताए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २८, २०७४, ०४:५०:२८